Koofurta Kuuriya: Mustaqbalka ardayda oo ku xiran inay ka gudbaan Imtixaanka iskuulka | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Koofurta Kuuriya: Mustaqbalka ardayda oo ku xiran inay ka gudbaan Imtixaanka iskuulka
Koofurta Kuuriya: Mustaqbalka ardayda oo ku xiran inay ka gudbaan Imtixaanka iskuulka
Posted by: Ahmed Haaddi 7 days ago
Himilo – Ardayda ku nool dalka koofur kuuriya ee soo gabagabeeya 12-kii sano ee waxbarashada aasaasiga ah, waxey u fariisanayaa imtixaanka aqbalaadda Koleejka. Suneung waa mid aad u adag waxa uuna soconayaa siddeed saacadood.
Xaalku waa uu adag yahay, ardayduna waxay dareemayaan caadaadis, iyaga oo isleh tolow makusoo bixi doontaan imtixaanka si ay idiin aqbalaan jaamacadaha, u heshaan shaqooyin, xiriirkiina mustaqbalkiinana u hagaago.
Waa sheekadan saddexda hablood ee Kim Min-Seo, Kim Ga-yeon iyo Lee Han-seul oo ku jira boqolkii cisho ee u danbeeyay ee diyaarinta mid ka mid ah imtixaanadda ugu adag dunidaan. Noloshooda maalin weliba waxey u dhaxeysaa cunto, waxbarasho iyo iney seexdaan.
“Waxaan imtixaanka innooga haray 100 cisho, lama hubo waxa innooga soo bixi doonna dadaalkii iyo juhdigii aan bixinay”.
Marka laga yimaado xilliyada cuntada, Kim Min-Seo waxey wax barataa inta u dhaxeysa siddeedda subaxnimo illaa kowda duhurnimo, maalin weliba.
Waxaa usii dheer in xittaa marka xiisadaha iskuulku dhammaadaan, inay xiisado kale qaadato, kuwaasi oo ay ku gaarto illaa tobanka habeenimo. Khibradda noocaan ah waxey ardayda kuuriyaanka ah la kulmaan laga soo billaabo yaraantooda.
“Hadda macallinkii wuu iga tagay”
“Waxaa jirta marar badan oo aan daalo waxaana doonaa inaan ooyo, balse la sheekeysiga iyo la cunteeynta saaxiibadey ayaa iga caawiya inuu iga yaraado welwelka”
Wuxuu waqtiga is guraba, hadda billaabashada imtixaanka waxaa ka harsan kaliya toddan maalin.
Kim Ga-yeon waxa ay aadaa dugsigaasi ku yaala jaziiradda, waxaana la dhigta 19 arday oo ay isku sanad yihiin. Waxey ku qasban yihiin inay ka tallaabaan biyo si ay u galaan imtixaanka aqbalaadda jaamacadda.
Waxaa loo keenaa haddiyado, iyada oo loo rajeeyo nasiib wacan. Balse qaarkood maba haystaan macalimiin ku filan oo u marin kara maadooyinka ay u baahan yihin.
“Toddobaad weliba waxaan ku qabsanahay inaan ka tago jaziiradda si aan u helo macalin ii gaar ah, haddii aanan sidaasina sameynay natiijadeyda ayaa hooseyn doonto”
Waxaa imtixaanka ka haray keliya hal isbuuc.
Lee Han-seul waxey tagtay dugsi kale, kaasi oo aanan xoogga saarin imtixaanka Suneung, si ay u hesho khibrado caawin kara, halka asxaabteedana ay hayaan wado aysan ku gaari karin imtixaanka.
” Wey yara adag tahay sababtoo ah halkan ma joogaan saaxiibadeyda”
Maadaama uu soo dhaw yahay imtixaanka, ardayda waxaa sii kordhaya walbahaarkooda mana awoodaan inay u baxaan bannaanka maalmaha fasaxa isbuuca.
“Haddii aanan natiijo fiican ka helin imtixaanka, ma waxaan noqon doonaa qof guuldareystay? mana ihi miyaa qof qiima leh?. Waxbarashada iyo hanaanka noocaan oo kale ah waxey iga dhigeen mid sidan oo kale u fikirta, balse hadda wixii ka danbeeya sidaan uma fikiri doono”
Waxaa hubaal ah in waxa keliya oo ay ka tarjumeyaan dhibcaha imtixaankaaga yihiin fahanka waxa aad ka dhigatay dugsiga, balse kama tarjumayaan fariidnimada kale ee kugu jirta.
“Macsalaama, waa innoo iyo la hardanka imtixaanka Suneung”.
Previous: Wax ka ogow laacibiin reer Koonfur Ameerika ah oo weli ka ciyaara qaaradooda
Next: Xiddigaha ugu qiimaha badan ee seegi doona koobka adduunka 2022